Nosy Maorisy: Eo am-panarahana ny dian’i Afrika Atsimo mba hiatrehana ny lasany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 13:34 GMT
i Afrika Atsimo no namorona ny hevitra “Vaomieram-pirenena ho an'ny Rariny, Fanarenana indray ireo traboina ary Fampihavanam-pirenena” mba hitsaboana ireo ratra nosokafan'ny politikan'ny fanavakavaham-pirazanana izay nampiharina tamin'ny 1948 hatramin'ny 1991 .
Tao anatin'ny lahatsoratra mikasika an'i Togo tamin'ny 21 Jolay farany teo, nohazavain’ i Kodjo Epou tao amin'ny tranonkalan'ny afrik.com ny fanamarinana sy ny tanjon'ny Vaomieran'ny Marina-Rariny sy Fampihavanana:
« Nitondra ny fametrahana rafitra ara-politika ambony dia ambony antsoina hoe : Vaomieran'ny Marina- Rariny sy Fampihavanana (CVJR) ny fitadiavana fiaraha-miainsa am-pilaminan'ireo mpifahavalo taloha tany amin'ny firenena telopolo teo noho eo manerana ny tany. Ny an'i Afrika Atsimo no tena malaza tao amin'ny kaontinanta Afrikana. Nisafidy izany mba hanamboaranaa ny làlana mankany amin'ny fampihavanana ireo firenena toa an'i Roandà, Ghana, Maraoka, Nizeria, Sierra Leona, ary Afrika Afovoany. Namorona ny vaomierany manokana i Kenya taorian'ny herisetra nandritra ny fifidianana tamin'ny desambra 2007. »
Tany Afrika Atsimo, tsara amin'ny ankapobeny ireo vokatra azo noho ny finiavana tsara avy amiin'ireo mpitondra toa an'i Nelson_Mandela, Willie de F.W. de Klerk ary i Msgr Desmond Tutu, samy nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana avokoa. Nanao tetezamita moramora ilay firenena, avy amina politika mpanavakavaka mankany amina fanjakana izay ny ankamaroany dia tsy manana hevitra ny hamaly faty. Toy ny nampahatsiahivan'i Claude Wauthier tamin'ny 2005 tao amin'ny dika natao ho an'ny aterineto ao amin'ny monde-diplomatique.fr:
Tsotra ilay fotokevitra: hahazo famelankeloka avokoa ireo tonga eo anoloan'ilay vaomiera mba « hibaboka » ny heloka nataony – ireo polisy nampijaly, indraindray namono, mpikatroka tao amin'ireo hetsika fanafahana ireo mainty no tena resahana tao anatin'izany, indrindra fa ny Kaongresy nasionaly afrikana (ANC) an'i Nelson Mandela. Nanaiky fepetra roa ny famelankelok'ireo mpitaky: voalohany, tsy hanaisotra ao anatin'ny tatitra ataony na iray aza tamin'ireo heloka sy fandikandalàna nataony, avy eo dia ny nihetsehany noho ny baiko avy amin'ny ambaratongam-pitantanany tamin'ny finoana fa nhetsika ho amin'ny «tanjona ara-politika » (lazaina fa fiarovana ny firazanana fotsy hoditra, ohatra). Nifanohitra tamin'ny zavatra natahoran'ilay filoha taloha Frederik De Klerk, tsy nanakana ny fifampihavanana teo amin'ny vondrom-piarahamonina mainty sy fotsy ny fanambarana ny fampijaliana matetika mahatsiravina natao tamin'ireo olona nokaramaina hamono. Nahavita ny fanafoanana hatezerana (catharsis ) izay napetrany ho tanjona izany ilay Vaomiera.
Sainam-pirenen'ny Nosy Maorisy, avy amin'i timparkinson tao amin'ny Flickr – lisansa CC 2.0
Tamin'ny 2008, nanapa-kevitra ny hanaraka ny ohatra nasehon'i Afrika Atsimo tamin'ny 2008 ny Nosy Maorisy mba hieritreretana ireo tsy rariny manana fototra ntaolo kokoa. Noraisin'ny Parlemanta tamin'ny 2008 ny tolodalàna iray ho famoronana ny Vaomieran'ny Rariny sy ny Marina. Nanomboka ny asany tamin'ny volana aprily 2009 izy io. Nanazava, noho izany, ireo ratra nilaina tsaboina ny tranonkala grioo.com:
Niaina ny fanandevozana aloha ny Nosy Maorisy, nanana andevo mihoatra ny 66 000 sady avy any Afrika no avy any Inde sy Malaizia ihany koa. Taorian'ny fanafoanana ny fanandevozana tamin'ny 1835, napetraka tao ny rafitra ‘engagisme’ (fanomezana tambiny ny asa vita), nifanitsy tamin'ny fotoana nametrahana azy tao La Réunion sy Kaomoro. Mpiasa afrikana, avya ny Karaiba, indiana ary maley no nampiasaina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ary na dia nahazo ny fahafahana voalohany sy nanapaka ny rojony aza izy ireo. Toy izany no niforonana, nandrosoana sy nampanan-karena ny Nosy Maorisy.
Nitatitra noho izany tao amin'ny blaoginy The Mauritian i Gérard Cateaux momba ny famoronana ity CVJR sy ity fandraisana fitenenana nataon'ny Praiminisitra tao amin'ny Parlemanta :
Tamin'ny fandraisany fitenenana tao amin'ny Parlemanta tamin'ny talata lasa teo, izay nanolorany ny tolodalàna ho fametrahana ity Vaomieran'ny Rariny sy ny Marina ity, tsy mbola nahitsy fiteny toy izao ny Praiministra, Dr Navin Ramgoolam : Tsy isa miverina mankany amin'ny valifaty izany, fa fitadiavana ny fifampihavanana, ny rariny ara-tsosialy sy ny firaisampirenena amin'ny alalan'ny dingana fanarenana ny marina ara-tantara…
Manana ny lanjany ireo teny ireo : ‘Fampihavanana’, ‘Rariny ara-tsosialy’ ary ‘Firaisampirenena’. Hampianay kely izy io : ‘Manangona izay miparitaka… ‘ Hisahana anjara asa mavesatra ity Vaomiera ity amin'ny fivoriana mba hametraka sy haminavina – raha toa ka mbola azo atao foana ilay dingana – ny hanazava ny ho olompirenena maorisiana amin'izao taonjato izao sy ny kalitao mibahan-toerana mialoha làlana ny hasambarany.
Niteraka ity fanehoankevitr'i Louis-René Dalai manaraka ity izay manasongadina ny tsy fitovian'ny apartheid amin'ny fanandevozana sy ny fanomezana tambiny asa natao nifanarahana io lahatsoratra io:
Mihevitra aho fa hetsika fisantarana tsara ilay hevitra famoronana ny ”Vaomieran'ny Rariny sy ny Marina ao Maorisy”, raha toa ny tanjona farany dia ny hanampy amin'ny fanorenana ”Tena Firenena Maorisiana”, fa tsy ny hizara ny mponintsika ho ”razamben'andevo”, razamben ”ireo nokamaina hiasa – Engagés”, na ho razamben'ny ” Ratsy Fanahy Mpanjanaka'…..
Ny miezaka ny handika ny ”Vaomieran'ny Rariny sy ny Marina”, napetraka tao Afrika Atsimo, miaraka amin'ny vokany nahazoana tombontsoa, satria ireo tonga nijoro vavolombelona ”ireo ihany ” avy amin'ny ”ankolafiny roa samihafa” no tomponandraikitra tamin'ireo heloka bevava nataony tamin'ireo ”Afrikana Tatsimo rahalahiny !!!….Fa raha ny mikasika ny Nosy Maorisy, efa tsy eo intsony hizara ny fijoroana vavolombelony ankehitriny ireo tomponandraikitra tamin'ny Fanandevozana, sy ireo niharam-boina!!!…..
Amin'ny maha-taranaka ”mpanandevo” ahy…miaraka amin'ny elanelan'ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny 1835/1840….Tsy mihevitra ny tenako ho tomponandraikitra tamin'ireo ”heloka” vita aho, izay nataon'ny razambeko!!!…raha toa ka hafa amin'izany tanteraka no toe-javatra ao Afrika Atsimo!!!…
Nanambara ny lexpress.mu ety anaty serasera tamin'ny 25 Aogositra fa:
Tamin'ireo atontan-taratasy 350 voarakitra hatramin'izao ao amin'ny Vaomieran'ny Rariny sy ny Marina, mikasika ny fitakiana tany avokoa ny ankamaroany amin'izy ireo. Amin'ireo tranga enina heno tamin'ity alarobia 25 aogositra ity, teo anatrehan'ny filoha Alex Boraine, dimy no nanao fitakiana tany, 200 metatra latsaka kely ka hatramin'ny 78 hektara. Ho an'i Jacques David, iray amin'ireo mpanampy ny Vaomiera, samy manana ny lanjany avokoa ny tranga tsirairay ary avoitrany tsara fa fiantombohana andianà fikarohana lava be ny taratasy fanamarinana fanànana.